स्थानीय निर्वाचनको दोश्रो चरण र अवको बाटो « Anumodan National Daily
स्थानीय निर्वाचनको दोश्रो चरण र अवको बाटो
प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७४, शनिबार ०९:३०
म अध्ययनको सिलसिलामा युरोप पसेको लगभग पााच वर्ष पुग्यो । अध्ययनकै सिलसिलामा अमेरिका र युरोपको समग्र बसाइले ममा एउटा नयाा चेत थपेको छ । सामान्य अवस्थामा म त्यहि चेतनालाई पछ्याउने गर्छु । यहााको समाजमा व्यत्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयताको यति सम्मानहुन्छ कि तपाईंका व्यक्तिगत कुराहरू कसैले सार्वजनिक गरेको खण्डमा कानुनी उपचार समेत खोज्न सकिन्छ । सार्वजनिक स्थलमा अनुमति बेगर तस्वीर खिच्ने देखि तपाईंको विमारीको सार्वजनिक चर्चा सम्म पनि गर्न पाइादैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको र व्यक्तिगत गोपनीयताको हदै सम्म सम्मान गरिने यो समाजबाट आफ्नो गाउा ठाउामा हुने व्यक्तिगत आक्षेपको राजनीति र व्यक्ति विशेषको चरित्रहत्याको प्रयास उति पाच्य नलाग्ने रहेछ । अनि त्यसरी अरुमाथि हिलो छ्यापेर आफू संलो बन्न खोज्ने प्रति त्यस्तै किसिमको औाला ठड्याउादा आफ्नो गल्तीको महशुस गर्नु त कता हो कता अझै आफै पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्दा रहेछन् । धनगढी उपमहानगरपालिका मेयरकालागी उठेका उमेद्वार लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालमा भएका केहि प्रकाशनहरूले पनि त्यस्तै अनुभुति गरायो ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनको पहिलो चरण सकिएको छ । विभिन्न प्रयोगहरू प्रतिको जनमत पनि बाहिर आएको छ । विपरित राजनीतिक विचार धारा बोकेकाहरूको गठजोड होस् या धर्म र राजतन्त्रको सतही नारा बोकेर मैदानमा उत्रिएकाहरू नै किन नहुन्, सबैले आ–आफ्नो हैसियत देखि सकेका छन् । पुरानो रक्सीलाई नयाा बोतलमा हालेर नयाा हो भनि बेच्न खोज्नेहरूको व्यापार बन्द जस्तै भएको छ । अर्कातिर नयाा अनुहार सागै नयाा जोश र जाागर लिएर मैदानमा उत्रनेहरूलाई जनताले निकै सराहनीय स्थान दिएका छन् । अझ यस्ता स्वतन्त्रहरू एक ठाउामा आएर जनतासामु जाादा यिनको परिणाम राम्रै हुनेमा धेरै जनता आशाबादी पनि छन् ।
नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूको विरोध गर्नुको अर्थ देश विकासमा उनीहरूको भूमिका नै थिएन भन्ने होइन । के चाहिा हो भने उनीहरू आफ्ना युगका नायक भएपनि समयकालमा बित्दै जाादा उनीहरूले थुप्रै गल्ती र कम्जोरीहरू प्रदर्शन गरि सकेका छन् । स्थापित राजनीतिक दलका कम्जोरी र दोषहरूकै कारण देशमा १३ हजार भन्दा बढि जनताको ज्यान जाने गरी भएको जनयुद्धको घाउ हाम्रो समाजमा अझै ताजा नै छन् । त्यसै क्रममा बेपत्ता भएका १००६ जनाको त अझै पनि टुङ्गो लागी सकेको छैन । त्यसको अलावा पनि मधेसमा विगत १० वर्ष देखि अस्थिरता छाएको छ । त्यसको पनि ठोस निकास हालको नेतृत्वले दिन सकेको छैन । बेरोजगारी र महंगी यस हदसम्म बढेको छ कि ५० लाख भन्दा बढि युवाहरू विविभन्न कारण विदेशी भूमीमा बस्न बाध्य छन् । राजनीति भनेको अरु केहि गर्न नसक्नेको पेशा बनेको छ । यस्तो परिदृश्यमा समाजमा केहि योगदान दिइसकेका र क्षमता प्रदर्शन गरि सकेका जोश जाागरले भरिपूर्ण रञ्जु दर्शना देखि किशोर थापासम्म अगाडि आउनुलाई उत्साह जनक मान्नु पर्छ । यो सम्भव तुल्याउनमा स्थापित राजनीतिक दलहरूको पनि ठूलो योगदान छ । त्यसका लागी उनीहरू प्रति कृतज्ञ हुादै अबको नेतृत्व चयनमा उनीहरूले नै सृजना गरेको राजनीतिक चेतनाको प्रयोग गर्दै असल र काम गर्न सक्ने उमेदवार छान्नुमा नै देश र जनताको भलाई हुन्छ ।
प्रजातन्त्र असल व्यवस्था मानिनुका पनि कारण छ । प्रजातन्त्रलाई जनताको शासन भनिनुको पनि कारण छ । सन् १६४२ मा बेलायतमा भएको गृहयुद्ध पश्चात थोमस हब्स जस्ता विद्वानले ‘एउटा बलियो सरकार नभएसम्म यो सबैको सबैसागको युद्ध चलिरहने छ’ भन्ने भनाइ राखे । त्यसो भन्दै गर्दा उनले एउटा साझा शक्तिको रुपमा कानुनभन्दा माथिको सर्वशक्तिमान राजतन्त्रको परिकल्पना गरे । नेपालमा पनि बेलाबेला यस्तै बहस चल्ने गरेको छ । त्यसैको प्रतिवादमा जन लोकीले सबै व्यक्तिहरूको सर्वस्वीकार्यताको आधारमा बनेको सरकारको पक्षमा वकालत गरे । उनको भनाइमा ‘मान्छेहरू फ्याराहरूबाट जोगाइएर के भयो यदि उनीहरूलाई सिंहको सिकार नै बनाउनु छ भने ?’ आाखिर राजा असल हुन्छ भन्ने कुराको कुनै निश्चितता पन ित छैन । मान्छेको स्वभावै स्वार्थी हुने र आफ्ना परायामा फरक फरक व्यवहार गर्ने हुनाले कसैलाई सर्वशक्तिमान बनाइ दिनु उचित पनि हुादैन । त्यसैले उनले सरकरले आफ्नो लक्ष पछ्याउने क्रममा व्यक्तिगत अधिकार हनन् गर्न नपाउने गरि नियान्त्रण गर्न सकिने अवसर हुनु पर्छ भनेर नियन्त्रित सरकारको विचार अघि सारे । उनले शक्ति बााडफााड र सन्तुलन तथा परिक्षणको व्यवस्थको आवश्यकता दर्शाए । त्यसैमा निश्पक्ष न्यायपालिकाद्वारा सरकारी शक्ति नियन्त्रणको विचार, उदारवादको पनि उदय भयो । उदारवादले स्वतन्त्रता र समानताको समर्थन गर्दै वंशानुगत विशेषाधिकार (योग्यता भएपनि या नभएपनि राजाको छोरो राजा हुने), राजाको दिव्य शक्ति लगायतका कुराहरूको विरोध गर्‍यो । तत्पश्चात रुसोले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनचाहना साकार पार्ने प्रजातान्त्रिक सरकारको कुरा अघि ल्याए । त्यसमा पनि बहुमतले अल्पसंख्यकहरूमाथि थिचोमिचो गर्न सक्ने भए । त्यसको नियन्त्रणको विधि प्रष्ट देखिएन । हाल आएर राजनीतिक अर्थशास्त्री ब्रेनन र बुखाननले लिभायथन सिद्धान्त अन्तर्गत सरकारलाई एकाधिकार सम्पन्न शक्तिशाली संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सरकार परोपकारी हुन्छ भन्ने पुरानो मान्यता यसले हटाएको छ र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न चुनाव मात्रै नभएर अन्य संरचनाहरू पनि हुनुपर्छ भनेर भनेको छ । हाल हामीसाग सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायालय छ । सन्तुलन र परिक्षणको आधारमा तिनीहरूले एक अर्कामाथि नियन्त्रण गर्छन् । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउाछ र त्यसलाई कार्यपालिका अथवा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउाछ । न्यायालयले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनकै अधिनमा रहेर कार्यपालिकाको कामकारवाही ठीक भए नभएको हेर्छ । व्यवस्थापिकाका सदस्य जनताबाट चुनिएर आउाछन् । नेपालको हकमा बहुमतले अल्पमतमाथि अन्याय नगरोस भन्ने हेतुले समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली लागु गरिएको छ । त्यसैले नेपालमा स्थापित हालको प्रजातन्त्र एकदमै उच्च व्यवस्था हो । यसलाई संस्थागत रुपमा बलियो बनाउनु र कानुनहरू जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर परिमार्जित गर्नु अबको आवश्यकता हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन त्यसै तर्फको प्रयास हो ।
स्थानीय निर्वाचनले सिंह दरबारका धेरै अधिकारहरू जनता नजिक पुर्‍याएको छ । नयाा संविधानको अनुसुची ८ मा हाल भइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनले पुरा गर्ने गाउा पालिकाले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम, स्थानीय कर संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरको विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधाभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय, सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, स्थानीय अदालत, जग्गा धनी पूर्जा वितरण, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास लगायतका अधिकार प्राप्त देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा त यी सबै अधिकार स्थानीय तहमा जानु भनेको हालसम्मकै सबै भन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्द्धि हो । तर यो उपलब्द्धि पनि खेर जाने लक्षणहरू देखिन सुरु भइसकेको छ । सिंहदरवार सागै सिंदरवारका पुराना कुसंस्कारहरू पनि जनता नजिक पुगेका छन् । सांसद किनबेचकै झल्को दिने गाउापालिका सदस्य किनबेच होस्, बुथमा प्रहरीकै छेउमा हुलदङ्गा गरिएका घटना होउन या निर्वाचनमा मतपत्र च्यातिएकै घटना किन नहोस्, यी सबैले आएको परिवर्तनलाई पनि पुरानै अवस्थामा फर्कान सक्ने खतरा देखिएको छ । पुराना दलहरूमा एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति यथावत छ । एउटाले गल्ती औाल्याउादा अर्कोले ‘तैले पनि यस्तो गरेको होइनस्’ भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसले दण्डहीनता देखि अराजकतालाई बढावा दिएको छ । साथै ‘काले काले मिलेर खाउा भाले’ को प्रवृत्ति पनि बढेको छ । अब यस्तो अवस्थामा कसैले स्वतन्त्र उमेद्वारको पक्षमा केहि कुरा गर्दैन भने कहिले गर्ने ? म त भन्छु प्रजातन्त्र मनपर्छ भन्ने जो कोहिले पनि यो भ्रष्टहरूको सिन्डिकेट तोड्ने बेला नै यहि हो । यति भयो भने सायद संसदीय निर्वाचन सम्म यिनले केहि आत्मालोचना गर्लान् ।
यहाा सिद्धान्तको राजनीति भन्दा पनि व्यक्ति पुजा बढि हावी भएको छ । अमुक पार्टीको समर्थन गर्नु भनेको सो पार्टीको झण्डा मुनी आएपछि जस्तै भ्रष्टाचारी असक्षमलाई पनि देवता बनाइनु पर्छ भन्ने छ । त्यो भेडे राजनीति अबका राजनीतिक चेतना भएका जनताले गरिरहनु आवश्यक छैन । मतदान गोप्य गराइनुको अर्थ पनि जनताको इक्षा जनताले विना डर त्रासका साथ अभिव्यक्त गरुन भनेर नै हो । राजनीतिक आस्थाको विज्ञापन गरिरहनु पर्ने भए सबैले खुल्लम खुल्ला मतदान गर्थे । भेला गराउादै हात उठाउादै मतदान हुन्थे । धर्म र राजनीतिक आस्था व्यत्तिगत कुरा हुन् । गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज उठाउनु जुन सुकै राजनीतिक आस्था बोकेका व्यक्तिहरूको धर्म हो । विपी देखि मदनभण्डारी सम्म, प्रचण्ड देखि उपेन्द्र यादव सम्म सबै व्यक्तिले गलत कुराको विरोध गरेरै जनआधार बनाएका हुन् । तिनलाई पछ्याउनेले पनि त्यस्तै साहस गर्न सक्नु पर्छ । अल्पमताम परिने डरले विपीले राणा र पञ्चायतका विरुद्ध नबोलेको भए देश कहाा पुग्थ्यो ? मदनभण्डारीले राजालाई चुनौति नदिएको भए बहुदलीय प्रजातन्त्र कसरी स्थापित हुन्थ्यो ? पुराना दलको विरोध नगरेको भए हालको लोकतन्त्र कसरी आउाथ्यो ? उपेन्द्र यादवले मधेसका मुद्दा नउठाएको भए अनि संघियताको आवाज नउठाएको भए मधेसी समुदाय प्रतिको हाम्रो हेराइ कसरी फेरिन्थ्यो र हामीले संघीयता कसरी चाख्न पाउाथ्यौा ?
कांग्रेस नेता राम शरण महतले दिलभूषण पाठक सागको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘कांग्रेसीहरू उदारवादी हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूको मत साधै एकै जनालाई जान्छ भन्ने हुादैन ।’ राजधानीमा कांग्रेस पछि पर्नु र नयाा अनुहार अगाडि आउनु पछाडीको कारणका रुपमा उनले त्यसो भनेका थिए । त्यसैले कांग्रैसी हुनु भनेको उदारवादी र समानताको पक्षपाती हुनु पनि हो । कांग्रेसका हालैका थुप्रै गलत कदमहरूमा सबै कांग्रेसीले कााध हाल्नै पर्छ भन्ने छैन । अनि त्यसरी कााध हाल्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दै हिाड्नेहरू कांग्रेस हुादै होइनन् । ‘कांग्रेस उदारवादी हुन्छन् ।’
कांग्रेस मात्रै होइन अन्य कुनै दललाई समर्थन गर्नेहरूले पनि अमुक व्यक्तिलाई भन्दा दलको आस्था र विचारलाई समर्थन गरेका हुन् । ती आस्था र विचारले समाजको उत्थान हुन्छ भनेर त्यसो गरेका हुन् । आफ्ना आस्था र विचारसाग पटकपटक सम्झौता गरेर बाटो बिराएकालाई अझै पनि समर्थन गरि नै रहनु पर्छ भन्ने केहि छ र ? व्यक्तिपुजामा नै लाग्ने हो भने त राजतन्त्र छादै थियो । तिनै राजालाई विष्णुका अवतार, दयानिधान, करुणानिधान, सर्वशक्तिशाली भनेर पुजि रहेकै ठीक थियो नि । यत्रो ज्यानको बाजी लाएर अनि यति धेरै साधन, श्रोत र समय खर्चन के खााचो थियो र ?
हामी विश्वको इतिहासबाट सिकेरै यहाासम्म पुगिसक्यौा । अझै सबे गल्तीहरू हामीले दोहोर्‍याउनु जरुरी छैन । हालको व्यवस्था गलत होइन । यसलाई संस्थागत गरि नसक्दाको परिणाम हामीले भोगी रहेका छौा । व्यक्ति भन्दा माथि संस्था आउने वित्तिकै र कसैले पनि निरपेक्ष अधिकार प्रयोग नहुने स्थिति श्रृजना हुने वित्तिकै हाम्रो समाज अघि बढेर जान्छ । निरपेक्ष विरोध भन्दा व्यक्तिका गलत पक्षको विरोध गर्दै सहि कदमको स्वागत गर्न सक्नुपर्छ । अवको स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्ति र उसको क्षमता हेरेर भोट दिनु पर्छ । हाम्रालाई चुनेर हामी यहाासम्म पुग्यौा अब पालो राम्रालाई चुन्ने हो । मलाई लाग्छ त्यो हामीले अब सक्नु पर्छ । यति त्यत्ति गर्न सकेनौा भने हामीलाई इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन । अस्तु ।